6 Zvikonzero Nei Introduction Inogona Kutungamira Kune Irritability (+ Chii Chaunofanira Kuita) - Pfungwa
6 Zvikonzero Nei Introduction Inogona Kutungamira Kune Irritability (+ Chii Chaunofanira Kuita)
Wese munhu anotsamwa pane dzimwe nguva, asi kupinza kwemunhu dzimwe nguva kungave kuri kukonzera.
Asi sei, nei, uye chii chaungaite nezvazvo?
Ndo zvatichaongorora muchinyorwa chino.
Izvi zvinotevera zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti muvhenekeri anzwe kushatirwa mushure mekudyidzana kwenguva refu, pamwe nemazano evanozivisa uye asiri ekutanga.
maitiro ekuita kuti mumwe munhu anzwe akakosha
Fungidzira kuve chaizvo, wakaneta chaizvo - mhando yekunzwa mvura kwekuneta kwakanyanya kunouya mushure mekurara kunotyisa kwehusiku.
Ichi chiziviso mushure mekuwandisa kuwanda.
Izvi zvinoitika nekuti uropi hwekupinza hunotarisisa zvakanyanya kune dopamine , kemikari inonzi neurotransmitter inoburitswa kana munhu akaita zvinhu zvinokurudzira kana zvinonakidza… sekutaura nekuva nevamwe vanhu.
(Tinokurudzira zvikuru kuti uverenge gwara redu pane zvazvinonyatsoreva kuva wekutanga iyo inovhara dzese nzira idzo uropi hwavo hwakasiyana neiyo yevanowedzera.)
Introvert inokurumidza kunetseka kubva kuneta kwevanhu uye inosangana nekuderera kwesimba semhedzisiro.
Kana munhu - wekutanga kana wekuturika - aneta mupfungwa, ndezvemuzvarirwo kuti vagumbuke.
2. Havagoni concentrate.
Pfungwa yekuzivisa inowanzo kuve yakabatikana panguva dzakanakisa, asi panguva uye mushure menguva yekushamwaridzana, zvakapetwa kudaro.
Izvi zvinoita kuti zvivaomere kuti vatarise pane chero chinhu zvachose.
Ivo vanowanzo tarisa kunze kubva kune chero chii chiri kuitika chakavatenderedza sezvo kwavo kwepfungwa kuno bvaruka nemifungo.
Saka kana imwe nzira yekukumbira kana kudiwa yakaitwa navo panguva ino, huropi hwavo hahukwanise kuibata uye vangangobata chero ani akaigadzira.
Ndiyo nzira yavo yekutaura, 'Ndapota, kwete, kwete ikozvino, kwete pandinenge ndichinetseka.'
une makore mangani lil uzi
3. Havagone kufunga zvakajeka.
Kusakwanisa kutarisisa zvinoreva kuti anopinza haagone kufunga zvakajeka, zvine musoro, kana zvine musoro.
Izvi zvinogona kuvatadzisa kuita zvinhu zvavaizogona kunge vachigona kuita.
Sezvineiwo, izvi zvinotungamira ku kushungurudzika iyo inogona kuratidza mune ratty, inokurumidza-kutsamwa maitiro.
Funga nezvazvo nenzira iyi: dai iwe waizofanira kunyatsotarisa pane chimwe chinhu uye munhu akakanganisa chitima chako chekufunga, iwe ungazozviona zvichisemesa.
Zvakanaka, uku kupindirana mushure mekudyidzana kwakawanda kwevanhu, zvisinei kuti vari kuyedza kuwana chii.
Zvinhu zvizhinji zvinova kunetsekana kudzamara vaita recharge mabhatiri avo.
4. Havagoni kutaura ivo pachavo.
Uropi hwakaipisisa hwehuropi hunoita kuti zvinyanye kuvaomera kuti vataure zvavanofunga nemanzwiro avo.
Zvese zvinove zvinorema uye havazivi nzira yekutaurirana izvi nevamwe , kunyanya kune avo vakanyanya kusimukira vasingakwanise kuenderana nezvakaitika kune wekutanga.
Uye kana munhu asinganzwisise kuti sei wekutanga ari kuzvibata sezvaari (semuenzaniso kubvisa, kuda kuve wega, kunyarara, nezvimwewo), muparidzi anonetsekana nekurohwa.
Ndiyo chete nzira yavanoziva yekuita kuti vamwe vanhu varemekedze kudiwa kwavo kwega.
5. Vanosangana nezviratidzo zvemuviri.
An 'introvert hangover' chirevo chinoshandiswa kutsanangura manzwiro anoita uyo anopinza mushure mekudyidzana kwenguva refu.
Izvi zvinofukidza akawanda emapoinzi pamusoro, asi kungofanana nechivimbo chinokonzereswa nedoro, chinowanzouya nemhedzisiro mhedzisiro.
Kutemwa nemusoro zvakajairika, uye zviratidzo zvakaita se dzungu, mhasuru kurwadza, uye mudumbu matambudziko zvinogona zvakare kuitika.
Saka hazvishamise, saka, kuti anopinza anogona kunge asingashiviriri uye asinganetsi pavanonzwa nenzira iyi.
6. Vanonzwa kubatwa.
Kana wekutanga asingakwanise kutiza uye kuwana imwe nguva yega, vanonzwa vabatwa.
Ivo vanoshuvira chimwe chinhu chavasiri kukwanisa kuve nacho, uye sekungofanana chero nekuchiva, izvi zvinoita kuti vave tetchy.
Vanoramba kuita chero kutaurirana kwenguva refu uye vanogona kusangana sevasina hunhu uye kure kana munhu akaramba achiedza kuyanana navo.
Zvese zvavanoda kuti vaite kutiza mamiriro acho ezvinhu uye kuva vega.
Iwo 9 Akavanzika Masimba Evamiriri
Kubudirira Munyika Yekuwedzeredza: Iyo Yekutanga YeGwara Recharging Mabhatiri
Makumi matatu Makotesheni Ekupemberera Introverts, Wallflowers Uye Lone Mapere
Nzira 15 Dzinopindirana Dzinopindirana Zvakasiyana Nenyika
5 Zvinhu Zvaunogona Kudzidza Kubva Kuneako Anopinza Shamwari
Izvo iwe zvaunogona kuita nezvazvo - kune introverts.
Iko hakuna nzira mbiri nezvazvo, kana iwe uchinzwa kushatirwa, unofanirwa kunge uri wega.
Iwe unofanirwa kutsvaga nzira yekuzvibvisa kubva kune chero chiri icho chiri kukumanikidza iwe uye uwane ako masimba mazinga kumashure uko kwaanofanirwa kuve ari.
Kune vanhu vaunosangana navo nguva dzose, senge mhuri, shamwari, kana vadikani, zvinokurudzirwa kuti iwe edza kutsanangura kupinza kwako uye zvazvinoreva.
ndiri kuitei muhupenyu
Iwe unofanirwa kuvaudza kuti nguva yako wega inogadziridza uye yakakosha kwauri sekudya nekumwa.
Ungangoda kudzokorora kuvaudza manzwiro auri kuita uye nei urikunzwa nenzira iyoyo kusvika pavari chaizvo tora it.
Asi zvakapihwa kuti zvakaoma kuita izvi kana iwe wadirwa mvura, zviri nani kuve neiyi hurukuro kana iwe uchinzwa kuzorodzwa.
Dhipatimendi inobatsira zvakare pakubata nevanhu. Iwe unogona kubvumirana kune zvimwe zvikumbiro zvenguva yavo kana kuita zvimwe zvinhu, nekunzwisisa kwakajeka kwekuti iwe unozopihwa imwe nguva yako pachako mushure.
Nenzira iyi, unogona kushandisa nguva navo wakachengeteka mukuziva kuti iwe unozokwanisa kudzoreredza mune isiri kure kure ramangwana.
Izvi zvinogona kudzikisira kushushikana uye kunetseka nezvekuti uchazotevera kuve wega riini.
Izvo iwe zvaunogona kuita nezvazvo - kune vasiri-vekutanga.
Kana iwe uri kuverenga izvi semumwe munhu anozviwana achizoenda kumberi kune iyo extrovert kumagumo kwetambo, iwe unogona kunge uri kuedza kunzwisisa kuti nei wekutanga muhupenyu hwako achishatirwa dzimwe nguva.
kana murume wako asingakudi
Ndinovimba iwe ikozvino uchave nekunzwisisa kuri nani pane zvazvinoreva kuva wekutanga.
Mhedziso kiyi yekubata neanotsamwira introvert ndeyekuvatambira ivo zvavari.
Kungoita nekuti iwe hausangana nehukasha hwehukama hwakafanana, hazvireve kuti hazvisi zvechokwadi kwavari.
Nekuyedza kumanikidza kumwe kudyidzana kana kutaurirana kudzika pahuro pavo pavanenge vatove kushaya simba, urikushayisa ruzivo rwavo. Izvi, zvega, zvinogona kushatirisa uye kutungamira kumhinduro nekukurumidza kubva kune wekutanga.
Iyo crux yenyaya ndeiyi: iwe unogona Push an introvert kupfuura iyo brink uye unotarisana nekusagadzikana kunodzivirirwa semhedzisiro, kana iwe unogona kuvapa iwo nguva nenzvimbo yavanoda kuti vadzivise kuwana iyo nzira kutanga nayo.
Ingo rangarira kuti hukama hwese inyaya yekupa uye kutora. Kuita nevamwe vanhu kazhinji kunonzwa sekupa kubva kune vanoona, uye saka ivo vanofanirwa kutora imwe nguva voga semhedzisiro.
Kubvumira nguva yekuzivisa ivo pachavo kunogona kunzwa sekuwanda kwekupa kubva pane yako maonero. Mushure mezvose, iwe unogona kunge uchida kuenda kunze uchiita chimwe chinhu navo kana kuvaita kuti vaite chimwe chinhu (semabasa epamba) kutenderedza imba.
Asi ingo rangarira izvo, kana zvadzorerwa zvakakwana, unowana kuzadza maererano nekubatana uye / kana zviitiko.
bts mauto anomirirei
ndichazombowana murume kwaye here
chii musiyano uripo pakati pebonde nekuita rudo
ndinofanira kunge ndichiitei nehupenyu hwangu
ndosarudza sei pakati pevakomana vaviri